समाचार - ग्राहक समीक्षा
मैनबत्ती उद्योगमा विकासको लामो अवधि पछि, हामी विन्बी मोमबत्तीले धेरै ग्राहकहरू जम्मा गरेको छ र धेरै देशहरूबाट उच्च प्रशंसा प्राप्त भएको छ। निम्नलिखित केहि ग्राहकहरु लाई हाम्रो उत्पादनहरु र सेवाहरु को मान्यता को लागी छन्।
▶ यो अद्भुत छ, र मैले मेरो मैनबत्तीहरूमा जाँच्दछु र यो राम्रोसँग काम गर्दछ, तर पग्लिएका पूललाई ​​राम्रोसँग बनाउनको लागि २- hours घण्टा आवश्यक पर्दछ। तर समग्रमा मलाई यो उत्पादन मन पर्छ। म आशा गर्दछ कि त्यहाँ कुनै विकल्प छ, जारको लागि विकको व्यासको जस्तै --8 सेमी व्यास छ।
Order भेन्डी यो अर्डरको लागि मेरो सम्पर्क थियो र उनको ग्राहक सेवा उत्कृष्ट थियो! म अत्यन्तै यो कम्पनीसँग काम गर्ने सल्लाह दिन्छु।
▶ मैले कालो ग्लास जारहरू अर्डर गरेको थिएँ, तिनीहरू चित्रजस्तै थिए। मलाई द्रुत शिपिंग मनपर्‍यो तर तिनीहरू लगभग ठीक त्यहाँ आइपुगे जब विक्रेताले उनीहरूले भनेको थिए र मैले धेरै शिपिंग र ट्र्याकि info जानकारी प्राप्त गरे। तिनीहरू राम्ररी प्याक गरिएका थिए र 300०० जारहरूमध्ये एउटा मात्र भाँचिएको हो।
▶ म यस उत्पादनको गुणस्तर र दृश्यबाट अत्यन्त खुसी छु। म मेरो मैनबत्तीको व्यवसायको लागि एक प्रतिस्थापन जार खोज्दै थिएँ र काठको ढकनीको साथ १oz२oz मैट कालो र सेतो जारहरूको अर्डर प्राप्त भयो। मैले चाँडै नै मेरो अर्डर प्राप्त गरें किनकि यो चीनबाट आएको हो। म निकट भविष्यमा बल्क अर्डर राख्ने आशामा छु जब म १,००० एकाईहरूको MOQ खर्च गर्न सक्दछु।
▶ राम्रो गुणको मोती मैनबत्तीहरू। ध्यानपूर्वक प्याक र समयमा वितरित। सेवा छिटो र मैत्री थियो। फेरि अर्डर गर्दछ।
▶ ढकहरू ठीक वर्णन गरिएको थियो र सेवा महान थियो। म पक्कै सन्तुष्ट छु।
▶ राम्रो गुण काठको विक्स र राम्रोसँग जल्दछ। भेन्डी फू धेरै पेशेवर र कुराकानी गर्न उत्तम छ। उनी तपाईंलाई सल्लाह चाहिन्छ। मूल्य पनि इमानदार छन्। धन्यवाद!
यहाँ हाम्रो ग्राहकहरु का चित्रहरु छन्।